KHLA Archives • Waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Tags Qoraalada lagu calaamadeeyay "KHLA"
Tiirka uu leeyahay Mr. Kaj Hollemans oo ka tirsan KH La-talinta Sharciga (KHLA). KH La-talinta sharciga waa mas'uul ka ah arrimaha khamriga, daroogada iyo siyaasadda tubaakada. Mulkiilaha, Kaj Hollemans, ayaa ku lug lahaa dejinta iyo hirgelinta siyaasadda Nederlaand. KHLA waxay la talisaa Golaha Wakiilada, degmooyinka iyo jaamacadaha, iyo kuwo kale, waxayna bixisaa talo sharci, istiraatijiyadeed ama siyaasad. Isaga oo hore u ahaa sarkaal sare oo dhinaca siyaasadda ka ah Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga, waxa uu helay waayo-aragnimo badan, waxana uu ka qayb qaatay wax ka beddelka dhawaan lagu sameeyay Xeerka Tubaakada iyo Sigaarka, Xeerka Khamriga iyo Cuntooyinka iyo Xeerka Opium-ka.
DaroogooyinkaWararkaSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka Ties Inc. November 17 2021
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talada Sharci) (Tiirarka KHLA). Ololaha cusub ee toddobaadkan waa…
DambiDaroogooyinkaka dhimanSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka Ties Inc. July 13 2021
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talada Sharci) (Tiirarka KHLA). Kadib isku daygii dil fulaynimo ee Peter…
DambiDaroogooyinkaSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka daroogada 18 May 2021
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talada Sharci) (Tiirarka KHLA). Jimcihii la soo dhaafay, ayaa…
albaabka daroogada April 21 2021
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talada Sharci) (Tiirarka KHLA). Tan iyo markii Golaha Shacabka…
albaabka daroogada March 8 2021
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talada Sharci) (Tiirarka KHLA). Isniintii hore waxaan ahaa…
albaabka daroogada February 10 2021
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talada Sharci) (Tiirarka KHLA). Bilowgii bishan…
DambiDaroogooyinkaCaafimaadkaMDMASharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka daroogada November 27 2020
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talada Sharci) (Tiirarka KHLA). Sanadihii ugu dambeeyey…
Sharci dejinta & Sharci dejintaWararka
albaabka daroogada 30 September 2020
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014). Toddobaadkii hore, dhowr…
albaabka daroogada July 21 2020
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014). Jimcihii hore waxaan joogay…
Sharci dejinta & Sharci dejintaDaroogooyinka
albaabka daroogada 29 May 2020
Bilihii la soo dhaafay, dowladdu waxay soo bandhigtay laba hindise oo maalgelin ah oo weli…
Sharci dejinta & Sharci dejintacannabis
albaabka daroogada April 8 2020
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014). Iyadoo loo eegayo dhammaan cabirrada ayaa…
Sharci dejinta & Sharci dejintacannabisDaroogooyinkaMDMAPsychedelics
albaabka daroogada March 10 2020
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014). Sida lagu sheegay warbixin sanadeedka 2019 ee…
Calaamadaha tayada CBD
albaabka daroogada January 21 2020
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014). Caannimada alaabta leh…
albaabka daroogada November 29 2019
Nederlaan - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014). Noofambar 23, akhri…